आज साइला जेठाजुको मेलामा मकैको मेलो सक्ने भर दिएकी छु । कुमालचारका दुइ मुठ्ठि चामलमा एक मुठ्ठि सिलामको अर्नि बनाइदिनु टाउकोदेखि खसेको मेत्रो लाई माथि सार्दै एकोहोरो बोल्दै कोदालो टिपीसकेकी थिइन आमा । टाउको हल्लाउदै मेलो जाने अनुमति दिदै थिइन । आमै भने, तेरो भाइलाई हेर्न लागेकी आटो पिध लागेछ । आटोमा अलिकति सिन्किको तिउन राख्दै एकोहोरो बोल्दै थिइन आबै चुल्होमा ।
मकैको बाक्लो रोटो अर्नि लिएर जाने मलाई सेतो चामलमा सिलाम मिसाएर लैजादा आफ्नै उचाइ ४ इन्च माथि बढेको जस्तो अनुभुति लागेको थियो । सानो–सानो कक्षामा पढ्दा आँखाले मात्र हरेक कुरा तौल गरेको हुन्थ्यो । अर्नि, कपडा, जुत्ता, चप्पल तर विस्तारै विस्तारै एक–एक गरेर कक्षा बढ्दै जाँदा अब आँखाले हैन हरेक कुरा मनले तौल्न लागेको थियो । तुलना गथ्र्यो हरेक कुरामा आफुले लगेको फापरको रोटो संग छिमेकी घाइली आमाकी छोरीले लगेको सुख्खा रोटीको । आफुले लगाएको झुत्रो जामामा उजेलीले लगाएको मेड्डि कमेजको तुलना गथ्र्यो । एउटा मन रहराउथ्यो । अर्को मनले रहराएको मनलाई ढुड्डाले सरी दबाउँथ्यो । कहिले उठ्न नसक्ने गरी ।
बा को काखमा भएका बा को मायामा बाचेकाहरुलाई म टोलाउदा लाग्थ्यो । उ चप्पलको सपनामा डुबेकी छे । विडम्बना बा को मायाको अभाव भएका म जस्ताहरुको वेदना बा को मायाको अभावको साह्रै खाँचो र महत्व शायदै मलाई र म जस्ता हरुलाई मात्र थाहा होला ।
दुई दर्जन जाहान भएको परिवार उसै त काम नगरि खाने उपमा दिएको मेरो नाममा खै किन हो सबै दाइ दिदी भाइ बैनिको एउटै आवाज हुन्थ्यो दिनभर स्कुला हल्लेर आएकी छे । मेलो, चुल्हो, कुटो, कोदालो,असिना, पसिना गर्नुपरेन । आमै यसलाई आधा रोटो दिएपनि हुन्छ है ! खै आमैको पनि त्यहि सोच र त्यही बुझाइ भएर होला अरुको तुलनामा मलाई हरेक खानेकुरा आधा नै हुने गथ्र्यो । कारण म घरको काम नगरेर हल्लिन वा आराम गर्न स्कुल गएकी हुन्थे । आमाको बलजफतिले पढ्न गएकी मलाई मेरी आमाले भने पढाइमा पनि काममा भन्दा कम श्रम हुन्न भन्ने बुझ्थिन र त आफ्नो भागको खानालाई टपरिमा वा पटुकीमा लुकाएरै राखिदिन्थिन । एकोहोरो गनगनाउथिन र निन्याउरो मुख लगाएर भित्ता तर्फ फर्केर भन्थिन सबैलाई अक्षर चिनाउन सकिएन । बाबै तै एउटी त होस अक्षर चिनेर मेरो सपना पुरा गर्ने । गुर्मैलो हाँसो हाँस्दै । उनको चिउडोलाई आफै तर्फ फर्काउँ दै आँखा जुधाएर भन्ने गर्थे तिम्रो सपना पक्कै पुरा गर्नेछु ।
पुस माघको त्यो ठिराउने चिसो दुई चार जना सड्डीले चप्पल पड्काउँदै स्कुल जान्थे । र, फुर्ति लाउँदै भन्थें – “हेरत चमेली मेरा बाले दिल्ली बाट एउटा रेशमी फरिया र पड्कीने वाला चप्पल पठाइदिएछन । यि चप्पलमा त मेरा खुट्टा नै झलमल बलिरहेका छन्,।” चप्पल लगाउने रहरले हैन उसका जस्तै मेरा पनि बा भैदिएका भए झट्टपट्ट मस्तिष्कमा बाको फोटो झल्झलि आउँथ्यो र मन अनयासै टोलाइदिन्थ्यो बा को यादमा । बा को काखमा भएका बा को मायामा बाचेकाहरुलाई म टोलाउदा लाग्थ्यो । उ चप्पलको सपनामा डुबेकी छे । विडम्बना बा को मायाको अभाव भएका म जस्ताहरुको वेदना बा को मायाको अभावको साह्रै खाँचो र महत्व शायदै मलाई र म जस्ता हरुलाई मात्र थाहा होला ।
नक्कली आवाजमा सक्कली पिडाहरु दबाउने नाम नै शायद सहर थियो । जीवन परिवर्तन गर्ने शिक्षा हैन, लवाई खवाई परिवर्तन गर्ने शिक्षा मात्र दिन्छ लाग्थ्यो यो शहरले । गरिबहरुको घाँटी थिचेर पल पल शिकार बनाउँछ लाग्थ्यो यो शहरले । इमान्दार विद्यार्थीलाई पनि जबरजस्त कुलत र भड्कीलो कोचिङ दिन्छ जस्तै लाग्थ्यो यो शहरले ।
सानो क्लासको पढाइ सकेर सबैले भन्ने र सुन्ने गरेको त्यो फलामे ढोकाको पढाइ पढ्नको लागि पारि गाउँको नयाँ स्कुलमा जानु पर्ने बाध्यता थियो नै । साथीहरुको लागि नयाँ ठाउँ नयाँ स्कुल र नयाँ परिवेशको उमंगले निद्रा परेको थिएन भने त्यसको ठिक विपरित मलाई त्यो नयाँ ठाउँमा म भन्दा पनि मेरो गरिबि भिज्न नसक्नेमा नमज्जा थियो नै ।
स्कुले जीवन होस या अन्य हरेक पलमा । कतिपयका सम्झदै खुशि लाग्ने पल होलान त कतिपयका कहानी कथाका थुप्रै पोकै पोकाहरु । पुरानो स्कुलदेखि यसै त दुरिका हिसाबले टाढाको बाटो त्यसमा लामो समय सम्मको पढाइ । दिउँसोको घण्टी बजेर अर्नि खाने त्यो पल । हिड चमेली भटभटे दाइको दोकाना छोले र चिउरा खान जाउँ । नाइ मेरो पेट दुख्छ काँचो चिउराले । हैन छोले मात्र खाएर आउलीस । हामी चिउरा छोले खाउला । हैन छोले मलाई कैले मन पर्दैन । (खान पाए त आधा कुक्कर छोले र आधा किलो चिउरा पनि ग्वाम कि ग्वाम खाँन्थे ) । त्यो पल शायद म बोलेकी थिइन । शायद बोलेको थियो त बाध्यताको एउटा घडि आफ्नै आवाजमा मेरो मुखमा पट्टि बाधेर जबरजस्ती । जाउ तिमीहरु मलाई दिउसोमा अर्नि खानी बानी छैन् झुठो आवाजमा आँखाको भाव नबुझुन भनेर अगाडिको किताबमा जबरजस्ति आँखा ठोक्काउँदै, आफुभित्रको गरिबिको अध्ययनमा घोत्लिएको पल उनै साथीहरुको आवाजमा पढनदासको उपमा बुलन्दित हुन्थ्यो । नजर नजुधाई जबरजस्ति खस्रो हाँसो हास्नुको विकल्प थिएन शायद । स्कुले जिवनका सयौं म पात्रहरुको यो इतिहास थियो भने आफुलाई एकैछिन यहिनेर सम्झदै अल्पविराम लगाएर, क्याम्पस जीवन तर्फ पाइला चाल्नुहोला ।
फलामे ढोकाको तैराई सगै, चाउरिएकी आमैको काख र आँखाभरि आसु, छचल्काएकी आमाको मुहारमा दुई चुम्की मूस्कान छर्ने एउटा सपनामा क्याम्पसको हुटहुटिले जबरजस्त बजार नतानेको पनि हैन । उसो त शहर छिर्ने कुनै उमंग रौनकता र नयाँपन पनि हैन । शायद हजारौं म पात्रहरु जसरी आसुको महासागरमा आँखा चिम्लिएर हिडिरहेका थिए । मलाई पनि त्यो भन्दा कुनै फरक अनुभुति थिएन ।
आफु जन्मेको गाउँं घरमा त सानो ठुलो गरिब–धनि, उच निचको पर्खाल थियो भने, यो हजारौं लाखौको भिडमा त झनै यो विभेदले धरहरा नै बनाइसकेको थियो । नक्कली आवाजमा सक्कली पिडाहरु दबाउने नाम नै शायद सहर थियो । जीवन परिवर्तन गर्ने शिक्षा हैन, लवाई खवाई परिवर्तन गर्ने शिक्षा मात्र दिन्छ लाग्थ्यो यो शहरले । गरिबहरुको घाँटी थिचेर पल पल शिकार बनाउँछ लाग्थ्यो यो शहरले । इमान्दार विद्यार्थीलाई पनि जबरजस्त कुलत र भड्कीलो कोचिङ दिन्छ जस्तै लाग्थ्यो यो शहरले । र त, यति ठुलो शहरमा पनि एक्लोपनको आभाष भै रहन्थ्यो पल पल पल ।
उसै त गाउँ छाडेको पल एउटा मन बेचैन भएर पलपल गाउँकै कोदो ढिडो र गुन्द्रुक खाएरै गाउँमा पानी पधेरो गर भनेर घच्घचाउँथ्यो । तरपनि अर्को मन आमाको त्यही आधि रोटिलाई सिड्डो बनाएर खान दे भनेर जबरजस्ती मनमा शाहसको किला ठोकिदिन्थ्यो । आमाको हरेक खुशिलाई बन्दकी राखेर शहर छिरेसंगै उनका ति बन्दकीहरुलाई एक एक गरेर फिर्ता गर्नु ठुलो सपना थियो । पढेर आफु ठूलो मान्छे बन्नु भन्दा पनि, उ पार्टिको कार्यक्रम रे आज कुनै विषय पढाइ हुँदैन । उ मास्टर आज कलेज नआउनी रे आज पढाइ हुँदैन, उसको भेला अरे, उसको भेला अरे । लाग्थ्यो – शहरिया क्याम्पसहरुमा राजनीतिको रस पिउन नसक्ने विद्यार्थी, विद्यार्थी नै हुन सक्दैनन् ।
एउटा छुट्टै उमंग बोकेर क्याम्पस गयो विना फोकटको कार्यक्रमले रुन्चे मुख लाएर कोठामा फर्कियो । त्यो पल सोच्ने गथ्र्यो – मेरो यत्ति खाली समय आमा सँग मेलो गएर मकै खनेको भए एउटा सुर्को त मज्जाले खनेरै सकिन्थ्यो । आखिर वर्षदिन खाने बाली त भित्रन्थ्यो । म जस्ता धेरै थान विद्यार्थीहरु एक्लै गनगनाउँथे । यो पल पक्कै पनि तपाई पनि फर्केर त्यो पल सम्झन सक्नुहुन्छ, जुन पल कलेज भनेर गयो मास्टरको नाममा उप मास्टर आएर राजनीति सिकाउँथे ।
यस्तै क्याम्पस असार महिनामा सुरु भएको थियो । पौष महिनाको अन्त्य तिर एक थान सहकर्मीको पिकनिक जाने कार्यक्रमको खेस्रा तैयारी चलेको थियो । यो पहलकदमी देखि यो मन हजार बार उम्कन खोेजेको थियो कारण रमाइलो भित्रको बाध्यता र गरिबिको बत्ति जुन जस्तै बलेको थियो । सबैको हो मा हस्ते थियो । सबै विद्यार्थी साथीहरु पिकनिक जानुपर्छ नजाने साथीलाई दोब्बर जरिवाना । (तेरा बा को विर्तामा लगा दोब्बर जरिवाना भन्न मन त थियो तर ) चारैतिर बाट वोटविरुवाले घेरेको यति आनन्दित ठाउँमा पनि अक्सिजन नपाएर धिप धिप गरेको विरामीको हालत थियो म आफुमा । आरतीले सर्टको वाउलो माथि सार्दै भन्छे चमेली तेरो नाम १ नम्बरमा लेखिएको छ । जम्मा एकै हजार (१,०००) त हो नि जसरी नी जानुपर्छ । नाइ शब्द ननिकालेस है रमाइलो गर्ने बेला नै यही हो हामी विद्यार्थीको ।
म बिरामी भएर उसको मुहारमा छाएको चिन्ता तर, तर मेरो लागि वान्ताले शरिर शिथिल भएपनि मनमा खुशिको यति ठुलो भोल्काना उठिरहेको थियो । कि, मानौ गरिवि भित्रको यो नाटकमा मैले आफैले आफैलाई नोवेल पुरस्कार घोषित गरेर ठुलो पर्दामा परिचित हुँदै थिए ।
आफ्नै भन्नेले जबरजस्त विष खुवाएर पनि हाँस्नुपर्छ । मरेको छैन भनेर खुवाएको सपथ समान थियो, त्यो उसको भाषाको जम्मा एकै हजार मेरो लागि । किनकि मेरी आमाले एक हजार कमाउनको लागि कम्तिमा पनि साउको मेलामा १० दिन भोको पेट बिहान देखि साँझ सम्म पसिनाको महल बनाउनु पर्छ । बहानाको मैदानमा डिजेल पेट्रोलको गन्धलाई दोष दिएर तर्किने वहानामा वान्तालाई जोडेकी थिए । मेरो आवाज भुइमा खस्न नपाउदै उसको आवाजमा थियो । यो बजार हो । गाउको जस्तो बाड्डो, टिड्डो, घुम्टि, सुम्टि केही हुदैन । तेरो लागि अघिल्लो क्याबिन सिट ।उसको दबाब यत्ति चौघेरामा बन्दित थियो । अब जेलको अपराधि कुनै पनि हालतमा उम्कन पाउदैन ।मेरो एक्लो बकबक चलेको थियो । गाडिको बाटो एकोहोरो वान्ता यमलोकको टिकट सरी हुन्छ । तै आफै भन यो उमेरमा मेरो लागि यमराजको मा पठाउछेस । उसको बोलीमा यत्ति दम थियो कि मानौ यमराजले लगे पनि उसले युद्ध गरेर मलाई फर्काउनेछे । एकापट्टि साथिको यति धेरै माया देखेर मेरो यो बहानावाजी प्रति आफैलाई क्रुर सजाय दिन मन लाग्थ्यो, त अर्कोतर्फ वान्ताको वहानामा पैसासँग जोडिएको यथार्थले छिटो छिटो गतिमा मुटुको धड्कन धेरै धड्किएको थियो । विवशताको खडेरीमा गरिबिको उपनामलाई दबाएर आफैलाई नियन्त्रित गर्दै झुठको हाँसोमा आरतीको विचारमा सहमति जनाउनु जरिवानाको भुक्तानी देखि बच्नु पनि थियो । साथीहरुको विचारमा हिउको नक्कली हाँसो हाँसेर मनलाई पटक–पटक थचार्नु अभिनय भित्रको महाअभिनयको पहल कदमी थियो ।
अस्पतालको शैयामा लखतरान भएको विरामीको शिथिल शरिर जस्तै जागरविहिन शरिर ल्याएर कोठामा थचानै नपाउँदै उसका अनेक अनेक कपडाको रोजाइको लागि सटिक प्रश्न थियो । चमेली भोलिको लागि कुन कपडा उत्तम होला भन्न त मन थियो आर्यघाटको कात्रो बेरेर जा ! तर गरिबिले त मलाई पो पाठ सिकाको थियो । यसको पिडा उसलाई किन सुम्पनु । रातो गुलाबी स्कटमा जिन्सको जकेट तेरो लागि करिस्मा मानन्धरको सैनावाली समान हुनेछ । मेरो रोजाइको कपडा रोजेर उ निदाउने तरखरमा पल्लो कोठामा सुत्न गएको पल मेरो गुरुयोजनामा म लागेकी थिएँ । त्यही गुरु योजना थियो छिमेकीको पातीको बोटदेखि पातिको रस पिएर जबरजस्ती वान्ता गरेर आजैदेखि शिथिल बनेर भोलिको पिकनिक आफ्नो लागि रद्ध गर्नु । जहाँ एउटा कुन कपडा लगाउने भन्ने चिन्ताको खल्लास अर्को एक हजारले अर्को महिना गुजार्ने बाध्यता । राति धेरै उकउकको आवाजमा ब्युझिएकी आरतीको मुहारमा छरपष्ट देख्न सक्थे । म बिरामी भएर उसको मुहारमा छाएको चिन्ता तर, तर मेरो लागि वान्ताले शरिर शिथिल भएपनि मनमा खुशिको यति ठुलो भोल्काना उठिरहेको थियो । कि, मानौ गरिवि भित्रको यो नाटकमा मैले आफैले आफैलाई नोवेल पुरस्कार घोषित गरेर ठुलो पर्दामा परिचित हुँदै थिए । र त, लागेको थियो नाटक र महानाटकको मञ्चनमा हिउँ हासो हासेर आफु हारेरै भएपनि अरुलाई विस्वस्त पार्न दिनको अभिनय हैन, रातको अभिनय नै काफि छ ।
ट्यागहरू: गरिबिको लडाइँमा
माघ २० गते मंगलबार, श्री गणेशको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस